Hua Hin, Thailand ~ Journey-Assist - mahaliana any Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Hua Hin
Hua Hin miaraka amin'ny tanàn-dehibeny akaiky an'i Cha Am (eo amin'ny ilany avaratry ny Hua Hin) sy Pranburi (eo atsimo) dia ao amin'ny Hoalan'i Thailand, ao amin'ny faritany Prachuap Kirikan, 225 km avy any Bangkok amin'ny lafiny atsimo-andrefana. azy.
Hua Hin no misy ny morontsiraka, izay malaza amin'ny fasika fotsy madio. Amin'ny fiteny Thai, "hua hin" dia "loha vato". Nahazo izany anarana izany izy noho ny antony anaovana ny faran'ny morontsiraka aminy.
Zavatra tokony hatao ao Hua Hin
Cha Am no misy 25 km miala ny tanànan'i Hua Hin. Ny tena tombony amin'ity tanàna ity dia ny fisian'ireo torapasika madio (momba azy ireo eto ambany) izay fambolena rofia.
Ny sakafom-pisakafoanana kely indrindra any amoron-tsiraka dia manasa sakafo matsiro karazany. Manakaiky an'i Pranburi, izay misy 23 km miala an'i Hua Hin, misy tempoly maro, izay mahaliana ny fitsidihana.
Hua Hin - ny trano tranainy indrindra any Thailand. Niseho tamin'ny taona 1920 izy. Talohan'izay, tamin'ny 1911, nisy lalamby lalantsara nosokafana teto tamin'ny rivo-piainana. Ilay mpanjaka tany Thailande Rama, Rama VI, dia nanapa-kevitra ny hanangana ny trano fonenany fahavaratra tany Hua Hin, ary avy eo ny mpikambana hafa tao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka dia nirohotra teto. Mpanjaka iray hafa, Rama VI, no nanangana eto amin'ny klioba golf voalohany manerana an'i Thailand, izay nantsoina hoe Royal Golf Club ary mbola mazoto miasa. Hua Hin no toerana fialan-tsasatra ankafizin'ny fianakaviana indrindra.
Koa satria tsy misy orinasa indostrialy sy zava-maniry amin'ny alina, Hua Hin dia tsara miala voly amin'ny maha ankohonana manontolo ary amin'ny ankapobeny ho an'ireo izay mangina. Afaka mandeha amin'ny yacht, ski jet, soavaly, milalao tenisy ary surf ianao. Hua Hin koa dia manana golf kalitao tsara indrindra.
Làlana mankany hua hin
Ny lalana mankany amin'io fivarotana io avy any Bangkok dia mandray 2,5 ora mandritra ny fiara na 4,5 ora XNUMX amin'ny lalamby. Hua Hin dia manana toeram-pisakafoanana marobe izay manolotra sakafo nahandro Thai sy hafa firenena. Ny trano fandraisam-bahiny lehibe tsirairay dia manana ny trano fisakafoanana azy manokana, maro ny manana buffets amin'ny alina manolotra lovia Thai sy sakafo hafa.
Misy toeram-pisakafoanana sasany manolotra dihy nentim-paharazana Thai. Ny faritra atsimo amin'ny pieran'ny tanàna no faritra fisakafoanana malaza indrindra any Hua Hin, izay misy trano marobe lehibe manolotra lovia fanjonoana matsiro.
Ao Hua Hin ianao dia afaka mividy amin'ny vokatra vita amin'ny tanana vita amin'ny lamba, landihazo, landy, tanimanga sy kojakoja, fanaka vita amin'ny hazo, ary firavaka sarobidy. Misy ny toeram-pivarotana Market Village miaraka amin'ny marika erak'izao tontolo izao, trano fisakafoanana, rojo iraisam-pirenena, sinema, karaoke, fivarotana entana ho an'ny ankizy, lakolosy fihodinana, trano fivarotana Tesco Lotus ary fivarotana Home Pro (entana an-trano). Misy koa ny tsenan'ny alina izay amidy vokatra isan-karazany, toy ny souvenir, fanomezana entana.
Fitaterana ao Hua Hin
Songteo ao Hua Hin
Ny fomba fanao amin'ny fitateram-bahoaka any amin'ity tanàna ity dia ny songteo. Ny fomba mety tsara ho an'ny hetsika tokana amin'ny halavirana fohy dia ny mototaxi. Ho an'ny halavirana lavitra dia mety ny mandondona. Tuk-tuks koa dia atolotra ho an'ireo orinasa kely sy entana. Ny tanànan'i Hua Hin dia iray amin'ireo teboka ao amin'ny lalan'ny bus izay mandeha avy any Cha Am mankany Petburi, mandalo ireo toerana mpizahatany indrindra indrindra.
Fizahantany Hua Hin
Hua Hin sy ny Cha ety akaiky dia azo raisina ho mety ho an'izay te hipetraka akaiky akaikin'i Bangkok mba handeha tsara amin'ny fitsangatsanganana. Ny torapasika any Hua Hin dia be lavitra noho any Pattaya, vitsy kokoa ny olona ao aminy, madio kokoa ny ranomasina. Ankoatr'izany, ny Hua Hin dia manana endrika manintona kokoa. Mamboarina tsara ny fotodrafitrasa eto, afaka miantsena am-pahombiazana ianao, misy koa ny fitsangatsanganana maro.
Ny tombony mazava Pattaya momba an'i Hua Hin dia azo antsoina hoe mpivaro-tena mora vidy. Ao Hua Hin, misy koa ny fialamboly sy andrim-panjakana "olon-dehibe" ary manana andriambom-pitiavana, saingy mbola ambany noho ny any Pattaya ary amin'ny vidiny avo kokoa. Ny ankamaroan'ireo andrim-panjakana ireo dia mipetraka any avaratra sy atsimo amin'ny arabe. Dacanuchit, ao amin'ny faritra misy ireo trano fandraisam-bahiny na hotely trano.
Ho an'ny mpivady miala sasatra amin'ny ankizy dia i Hua Hin no toerana tsara indrindra any akaikin'i Bangkok. Na izany aza, raha tsy tafiditra ao amin'ny renivohitra Thai ny drafitrao dia mahaliana anao fotsiny ny fialantsasatra amoron-dranomasina, dia tsara kokoa ny mandeha any amin'ireo nosy Thailand.
Marihina fa i Hua Hin no antoka azo antoka indrindra any amin'ny toby Thai rehetra. Eto no misy ny trano fonenan'ny lohataona, koa ny polisy ao amin'ity tanàna ity dia miasa ho an'ny tena izy, ary tsy mamorona endrika endrika asa, toy ny matetika any amin'ny toerana hafa. Akaikin'i Hua Hin, na any an-dranomasina aza dia misy sambo an'ny tafika an-dranomasina Thai (2 km miala ny morontsiraka), manazava ny alina amin'ny alàlan'ny fanazavana, satria mety ho heverinao fa trano fisakafoanana mitsingevana io.
Io morontsiraka io dia hita ao akaikin'ny Takiab (fa eo amin'ny ilany mifanohitra amin'ny City Beach) kosa anefa tsy hita eto ny makia. Ny morontsiraka Takayuu dia mitovy amin'ny tsena atsinanana - tsy misy feo, samy hafa, tsy manana sisiny mazava, toa miharihary.
Sarotra ny milomano eto, satria ny rano tsy mitroatra mandritra ny ampolony metatra. Ny fanamorana ny sunbatsa dia tsy dia mety kokoa noho ny any amin'ny torapasik'i Hua Hin. Saingy, mivezivezy manerana ny ranomasina izy, ary mankasitraka ny sambo (akaikin'ny voromahery), dia azo atao izany. Ny tombony lehibe amin'ny morontsirak'i Tao dia ny maha-akaiky azy eo an-tendrombohitra mahafinaritra ilay anarana mitovy, ary koa ny an'ny Turtle Temple, izay miorina amin'ity tendrombohitra ity. Afaka maka sary tsara tarehy ianao.
Sai Noa dia mendrika ho an'ireo izay mankafy fialan-tsasatra milamina: mpivady, anisan'izany ny antitra na miaraka amin'ny zaza, ary koa sipa manina. Tsy be olona io, be madio, feno fasika sy akorandriaka. Ny aina lalina no mahazo aina. Ity moron-dranomasina ity dia bay kely eo afovoan'ny hantsana mahafinaritra, namboarina ho an'ny maintso. Tsy misy ny sakafo tsara sy ny fialam-boly maro isan-karazany, tsy sahala amin'ny morontsiraka tanànan'i Hua Hin. Na izany aza, tsy hisy handrebireby ny zava-boahary tiana: tsy hita ny mpandeha an-tongotra. Tsy misy trano fandraisam-bahiny na ireo. Tsy azonao atao ny mitondra an'i Sai Noi amin'ny fitateram-bahoaka.